November 13, 2019 KhitthitMyanmar ကြားသိရသမျှ 0
လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖေးမရမည့်အစား အမြဲတမ်းဝေဖန်တိုက်ခိုက်တတ်သူတွေဖစ်တယ်လို့ ပညာရှင်အချို့ကဆိုပါတယ် … ။
ကိုယ်အသားဖြူရင် အသားမဲသူကိုလှောင်တယ် ၊ ကိုယ်က အရပ်ရှည်ရင် အရပ်ပုသူကိုလှောင်တယ် ၊ ကိုယ်ကချမ်းသာရင် ဆင်းရဲသူကိုလှောင်တယ် …. ။ တစ်ပါးသူရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ဖေးမရမည့်အစား ဖယ်ကျဉ်သွားအောင် တိုက်ခိုက်လေ့ရှိကြပါတယ် …. ။
အားနည်းသူကိုတွေ့ရင် စရမည့်သတ္တဝါကိုတွေ့သလို စနောက်တတ်ကြတာတွေဟာလည်းလူတွေပါပဲ …. ။ အခုလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးက မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုအဆိပ်ခပ်သတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။
ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အနောက်ပိုင်း မဟာရတ်ရ်ှထာပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ (၅) ဦး သေဆုံးခဲ့ရပြီး သေဆုံးမှုထဲမှာ ကလေးငယ် ၄ ဦးလည်းပါဝင်နေပါတယ် …. ။ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ မိသားစုဝင်တွေဟာ သူ့ကိုအသားမဲတယ် ၊ ဟင်းချက်မကောင်းဘူးရယ်လို့ အမြဲတမ်းစနောက်ပြီး နှိမ်ခဲ့တာကြောင့် နာကျည်းစိတ်နဲ့ အခုလို အဆိပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ခပ်တာကတော့ မိသားစု စားသောက်ပွဲတစ်ခုမှာ စားစရာတွေထဲကို ပိုးသတ်ဆေးတွေထည့်ပြီးတော့ လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့ ဆိုထားပါတယ် …. ။
ဒါကြောင့် တစ်ပါးသူ မခံနိုင်တဲ့ အရာတွေကို သတိထားပြီးစနောက်နိုင်ကြစေဖို့နဲ့ ဒီဖြစ်ရပ်လေးကို အတုယူပြီး အကျီစားသံ ရန်များဆိုသလို မပြုကြဖို့ သတိရှိမိစေဖို့ တင်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။
လူတှဟော တဈယောကျနဲ့တဈယောကျဖေးမရမညျ့အစား အမွဲတမျးဝဖေနျတိုကျခိုကျတတျသူတှဖေဈတယျလို့ ပညာရှငျအခြို့ကဆိုပါတယျ … ။
ကိုယျအသားဖွူရငျ အသားမဲသူကိုလှောငျတယျ ၊ ကိုယျက အရပျရှညျရငျ အရပျပုသူကိုလှောငျတယျ ၊ ကိုယျကခမျြးသာရငျ ဆငျးရဲသူကိုလှောငျတယျ …. ။ တဈပါးသူရဲ့ စိတျခံစားခကျြကို ဖေးမရမညျ့အစား ဖယျကဉျြသှားအောငျ တိုကျခိုကျလရှေိ့ကွပါတယျ …. ။
အားနညျးသူကိုတှရေ့ငျ စရမညျ့သတ်တဝါကိုတှသေ့လို စနောကျတတျကွတာတှဟောလညျးလူတှပေါပဲ …. ။ အခုလညျး အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ အသကျ ၂၈ နှဈအရှယျ အမြိုးသမီးက မိသားစုတဈခုလုံးကိုအဆိပျခပျသတျတဲ့ ဖွဈစဉျတဈခုဖွဈပှားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ …. ။
ဒီဖွဈစဉျကတော့ အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ အနောကျပိုငျး မဟာရတျရျှထာပွညျနယျမှာ ဖွဈပှားခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ (၅) ဦး သဆေုံးခဲ့ရပွီး သဆေုံးမှုထဲမှာ ကလေးငယျ ၄ ဦးလညျးပါဝငျနပေါတယျ …. ။ ရဲတပျဖှဲ့က ဖမျးဆီးစဈဆေးကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ မိသားစုဝငျတှဟော သူ့ကိုအသားမဲတယျ ၊ ဟငျးခကျြမကောငျးဘူးရယျလို့ အမွဲတမျးစနောကျပွီး နှိမျခဲ့တာကွောငျ့ နာကညျြးစိတျနဲ့ အခုလို အဆိပျခတျခဲ့တာဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။
ခပျတာကတော့ မိသားစု စားသောကျပှဲတဈခုမှာ စားစရာတှထေဲကို ပိုးသတျဆေးတှထေညျ့ပွီးတော့ လကျတုံ့ပွနျခဲ့တာလို့ ဆိုထားပါတယျ …. ။
ဒါကွောငျ့ တဈပါးသူ မခံနိုငျတဲ့ အရာတှကေို သတိထားပွီးစနောကျနိုငျကွစဖေို့နဲ့ ဒီဖွဈရပျလေးကို အတုယူပွီး အကြီစားသံ ရနျမြားဆိုသလို မပွုကွဖို့ သတိရှိမိစဖေို့ တငျပွလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ …. ။